China mpanamboatra milina fanenitra laser mahery vaika | Guo Hong
Plate sy Tube Laser Cutting Machine
Tube mandeha ho azy Laser fanapahana milina
Masinina lasitra laser-tanana
Fandriana fanariana laser
Masinina fanapahana laser fibre mahery
Masinina fanapahana laser fibre mahery vaika dia manana loharano laser laser mitarika izao tontolo izao izay miteraka laser mahery izay mifantoka amin'ny zavatra ary mitarika fiempoana sy etona eo noho eo. Ny fanapahana mandeha ho azy dia fehezin'ny rafitra fanaraha-maso isa. Ity milina hi-tech ity dia mampifandray ny haitao laser amin'ny alàlan'ny fibre, ny fifehezana isa ary ny teknolojia milina marina.
Masinina fanapahana laser fibre mahery.
Miaraka amin'ny mpiaro sy ny latabatra azo ovaina azo soloina.
Ny fitsipiky ny miasa amin'ny milina fanapahana laser fibre
Takelaka banga antsasaky ny farafara farafara famaohana
Takelaka boribory antsasaky ny habakabaka siklôlika, miaraka amina faritra fanafanana kely, hisorohana ny fiovana amin'ny fandriana milina noho ny hafanana maharitra maharitra, manome antoka mafy ho an'ny mpanjifa hahatsapa ny fanapahana andiany maharitra amin'ny takelaka matevina sy matevina.
Germany Precitec fanapahana loha-ny teknolojia mainty an'ny loha fanapahana laser
Perforation tsy inductive, fandidiana haingam-pandeha, fifantohana fiara, fanapahana malefaka fitaovana samihafa sy hatevin'ny takelaka. Taper kely, faritra mamirapiratra, faritra manapaka milamina tsy misy burrs, ny rafitra anatiny amin'ny lohan'ny laser dia voaisy tombo-kase tanteraka, izay afaka manakana ny ampahany optika tsy ho voaloton'ny vovoka, miaraka amin'izany, azo antoka sy marin-toerana izy io.
Rindran'ny alim-by alefa aluminium
Alumium bato avo tsindry hazo, amin'ny fampisehoana runing tsara, deformation fanoherana mafy, hazavana lanjany, avo tanjaka sy mateza kokoa, ny andry dia afaka mahazo mihazakazaka ambony valinteninao sy ny fahombiazan'ny hanatsara fanodinana.
Rafitra fifandraisana tsara
Fitaovana rafitra fanaraha-maso manan-tsaina mba hahatsapa ny fizotry ny famokarana sary sy ny fifandraisana indostrialy, Hampitomboina ny fahombiazan'ny fitaovana ary hampihena ny lozam-pifamoivoizana.
Loharano laser IPG
Ilay mpanamboatra loharano laser malaza indrindra eto an-tany. Ny fahaizan'ny fanapahana mahery vaika, ny hatevin'ny fanapahana vy dia mety hahatratra 80mm. Kalitao tsara amin'ny hery lehibe. Fahombiazan'ny fiovam-po elektro-optika avo kokoa, fanjifana herinaratra ambany ary vidin'ny fikojakojana ambany
Rafitra fanaraha-maso mahery vaika manokana ho an'ny milina fanapahana laser, fiasa diagnostika feno mba hahitana hadisoana haingana, ny tahiry fikirakirana mifandraika amin'izany dia azo apetraka arakaraka ny fitaovana sy ny hateviny, ny fiasan'ny akany mandeha ho azy., Ny fizahana ny kaonty sy ny asa fanamboarana sary sarotra. lalana manapaka, Araho ny fiakarana an-tsaina sy ny fiakarana an-tsakany sy andavany mba hahatonga ny masinina hahay hamindra kokoa sy hanafainganana haingana kokoa.
Modely milina GHJG-3015 ◆ GHJG4020 ◆ GHJG6020 ◆ GHJG-6025 ◆ GHJG-6030
Faritra miasa 1500x3000mm ◆ 2000x4000mm ◆ 2000x6000mm ◆ 2500x6000mm ◆ 3000x6000mm
Max. Haingam-pandeha 120m / min
Hafainganana haingana 1.2G
Fahamarinana fametrahana toerana ± 0,03mm
Famerimberenana ± 0,02mm
Hery azo ampiharina 6000W-20000W
1.Vidina ambany indrindra: manapaka ny karazana metaly rehetra amin'ny alàlan'ny rivotra;
Fampisehoana 2.High: loharano laser vita tamin'ny fibra tany am-boalohany, fampisehoana marin-toerana; ny androm-piainana dia mety mihoatra ny 100,000 ora.
3.High fanapahana haingana sy ny fahombiazan'ny: nanapaka mihoatra ny 10 metatra ny takelaka manify izy isa-minitra.
4.Fikojakojana laser maimaimpoana.
5.Ny sisiny sy ny faritra dia malama ary tsara ary misy fisolantsolana kely, malefaka ary tsara tarehy.
6.Mototra servo maotera sy ny rafitra fiomanana maharitra fanapahana maharitra.
Rindrambaiko 7.Versilable ahafahana manao sehatr'asa mifandraika amin'ny endrika sy endrika an-tsoratra, mora ny asa, malefaka ary mety.
8.Manapaka takelaka na fantsom-by, indrindra ho an'ny fanapahana vy haingana, vy karbonika, vy manganese, ravin-dabozia, ravina firaka, vy tsy fahita firy, sns.
Teo aloha: Masinina mpamokatra lasantsy indostrialy 8 taona - Beam Aluminium Cast - Guo Hong
Manaraka: Masinina manapaka laser vita amin'ny fibre tanteraka
masinina fanapahana laser laser cnc
masinina cnc laser
fanapahana laser fibre amidy
vidin'ny laser laser
milina fanapahana laser fibre china
vidin'ny milina fanapahana laser
masinina tamin'ny laser
milina fanapahana laser fibre vy
Masinina manapaka laser fibre optika
Masinina manapaka laser vita amin'ny fibre tanteraka
Lehibe endrika feno takelaka takelaka takelaka fifanakalozana ...
Masinina fanapahana laser fibre takelaka
Misokatra Type Fiber Laser Cutting Machine
Zone A, Parker Industrial Industrial Manufacturing, Binhu Avenue, Zone teknolojia avo lenta, Pizhou, Faritanin'i Jiangsu